Ulo Ohere di onu ala na Audio Ga-abawanye Njikọ vidiyo | Martech Zone
Monday, September 8, 2014 Tọzdee, Febụwarị 25, 2021 Douglas Karr
Otu n’ime ihe kpatara anyị ji bido usoro vidio a bụ iji gosi etu ọ dị mfe idekọ ma bipụta vidiyo iji nyere gị aka ịzụ ahịa azụmaahịa gị. Mepee ọ bụla Mac ma ọ bụ PC ọ bụla taa ma enwere igwefoto dị na igwe okwu dị njikere ịdekọ vidiyo vidiyo nke 1 na-esote. Ọkụ na esịtidem ndekọ usoro na pụọ ​​na ị na-aga! Enwere otu obere nsogbu.
Igwe okwu na-abata n'ime dị oke egwu. You ma na ndị mmadụ ga-akwụsị ikiri nnukwu vidiyo nwere egwu dị egwu…. na-ekiri video na egwu mma video ma ezigbo olu? Audio bu igodo iji tinye aka na vidiyo. Ma ị gaghị eme nnukwu ego na ngwa ọdịyo. Achọrọ m igosipụta ya site na ịdekọ vidiyo na-esonụ.
Anyị zụtara a ọnụ ala lavalier ọnụ ala na AmazonỌ na-efu $ 60 gbakwunyere mbupu na njikwa. Ga-anụ ntakịrị mkpọtụ sitere na ya ma ọ dị ntakịrị, ma e jiri ya tụnyere igwe okwu dị n'ime ngosi $ Apple Apple Thunderbolt, ọ bụ abalị na ehihie. Hụ na ị na-ekiri vidio ahụ dum iji nụrụ ọdịiche dị na ya.
Igwe okwu mbido bụ ihe Audio-Technica AT2005USB Cardioid Dynamic USB / XLR Igwe okwu ọ dịkwa n'okpuru $ 100. Anyị na-eji ya maka pọdkastị, ndekọ vidiyo na ọbụna oku Skype. Ọ bụ obere na mfe na-ebu gị n'okporo ụzọ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịpụ apụ, ị nwere ike zụrụ di na nwunye Sennheiser EW122PG3-Igwefoto Ugwu Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe na a Mbugharị PodTrak P4 Podcast edekọ. Naanị ọghọm dị na ya ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịtinye igwe okwu lavalier na igwefoto gị, ị ga-eji onye na-edekọ ihe bia wee tinye ihe ọdịyo na vidiyo ahụ na ngwanrọ edezi vidiyo gị. Nke ahụ si na mpaghara dị mfe pụọ, agbanyeghị, nke na-emegide usoro a.
Ngọnarị: Ana m eji njikọ njikọ m na edemede a maka Amazon.
Tags: mic apogeeaudioọnụ ala Lavalier micigwe okwu lavalierNdekọ ọdịyoịnyịnya lavalierigwe na-agba ịnyịnya lavalierchukwu micmbugharị dijitalụ teepu